MySansar Exclusive: खोज (भाग २) – MySansar
MySansar Exclusive: खोज (भाग २)
Posted on September 2, 2012 September 4, 2012 by Salokya
सकारात्मक सोचाइबारे बहुचर्चित पुस्तक ‘सोच’ का लेखक कर्ण शाक्यले आफ्नो दोस्रो पुस्तक ‘खोज’ बजारमा आएको धेरै भएकै थिएन, माइसंसारमा प्रकाशन गर्ने अनुमतिसहित पूरै पुस्तकको सफ्टकपि पठाउनुभएको थियो। लेखकले अनुमति दिए पनि म आफैले यहाँ राख्‍न धेरै समय लिएको हुँ। बीचमा ‘सोच’ जस्तो यसलाई पनि अडियोमा नै प्रस्तुत गर्ने कि भन्ने पनि तयारी भएको थियो। तर त्यो तयारीले मूर्त रुप लिन सकेन र ढिलै भए पनि पुस्तकको अंश गत सातादेखि हरेक आइतबार राख्न थालेको छु। पहिलो भाग यहाँ।
कैयौँचोटि मेरा परिवारका सदस्यहरूले मलाई भनेका छन्, ‘अब भयो, जेजति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुभयो। अब तपाईले जिन्दगीको अर्को धार सुरु गर्नुपर्‍यो।’ दोस्रो विवाह गरेपछि क्यान्सरसम्बन्धी समाजसेवाबाट संन्यास लिने विचार मैले पनि गरेको थिएँ। किनभने जुन बेला म क्यान्सरको कुरो गर्छु, त्यो बेला मेरो मनभित्र बितेका भावनात्मक एवम् मार्मिक लहरहरूमा म बग्ने गर्छु। त्यसरी अतीतका सम्झनाहरूमा हराउँदा सायद मेरी दोस्री श्रीमतीको मनमा अवश्य पनि असजिलोपन र अप्ठ्यारोपन अनुभव भएको हुन सक्छ। किनभने कुनै पनि श्रीमतीलाई आफ्ना श्रीमान्को अरूसितको सम्बन्ध स्वीकार्न सजिलो हुँदैन, चाहे त्यो अर्की आइमाई मेरै पहिलेकी श्रीमती नै किन नहोऊन्।
तर क्यान्सरसम्बन्धी ज्ञान र चेतनाले मलाई त्यसै चुपचाप बस्न दिएन। मैले आफ्नो रोगबारे विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय डाक्टरहरूसित सरसल्लाह लिने काम गरिरहेँ। यसै क्रममा दुई वर्षपहिले म फेरि बैङ्ककको बुम्रुङग्राड अस्पतालमै पुगेँ र मेरो पहिलेकै डाक्टरलाई जचाएँ, बोन स्क्यानिङ गराएँ, केही देखिएन। पेटको अल्ट्रासाउन्ड गराएँ, केही भेटिएन। मुत्रद्वारमा डाक्टरले औँला घुसारेर जाँच गरे, त्यहाँ पनि कुनै असाधारण सङ्केत देखिएन। तर PSA भने घट्तै घटेन। प्रोस्टेटसम्बन्धी बेल्जियमका विश्वविख्यात डाक्टर आइन मार्गरेटले त भने पनि, ‘अब केही धन्दा मान्नुपर्दैन, रक्तपरीक्षण गर्ने काम छोडिदेऊ, आरामले बस, मासु धेरै नखाऊ, एक्सरसाइज गर र क्यान्सरको चिन्ता छोड।’
छोराले जबर्जस्ती गरे पनि मैले मानिनँ र नेपालमै फर्किएँ। काठमाडौँ आएपछि मेरी श्रीमतीले अमेरिकामा आफ्ना माइती भएका हुँदा त्यहीँ गएर उपचार गर्ने कुरा गरिन्। त्यो पनि मैले मानिनँ। नमान्नुको पनि कारण छ। त्यो के भने अमेरिकामा मेरो एउटा मित्र छ डा. स्टिभ स्टिभेन्स। ऊ युनिभर्सिटी अफ म्यासाच्युसेट, युम्यासको समाजशास्त्रको प्राध्यापक हो। उसलाई पनि प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको थियो। सात वर्षपहिले बोस्टन सहरको एउटा उच्चस्तरीय अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेको थियो। शल्यक्रियापश्चात घाउ नै राम्ररी निको नभईकन तीन दिनमै पेटमा पाइप र पिसाब सङ्कलन गर्ने प्लास्टिक ब्यागसमेत झुन्ड्याई उसलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाइएको थियो। अपरेसनको टाँका नकाटेसम्म उसले अस्पतालमै बसेर उपचार गर्न खोजेको थियो। तर ‘इन्सुरेन्स पोलिसी याने’ बीमासम्बन्धी नियमले नदिएपछि घरैमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। घर गएको तीन दिनपछि नै पाइप्ाबाट आउनुपर्ने पिसाब बन्द भएछ। उसलाई परेको पीरमर्का मलाई सुनाउँदा यस्ता समस्याहरू नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाइयो। विदेशीहरू त बच्चैदेखि स्वतन्त्र जीवनशैली बिताउने भएका हुँदा यस्ता समस्याहरूलाई उनीहरू सहजै लिन्छन्, तर टाउको मात्र दुख्यो भने पनि
पैसा बढी खर्च हुन्छ भनेर अमेरिकामा उपचार गर्न नचाहेको होइन। कहिलेेकाहीँ हामीलाई अपर्झट आपतविपत् आइपर्दा हतारिएर हामी त्यस्तो निर्णय गर्छाैं जसका कारण हामीले पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ। क्यान्सर रोग लाग्यो भने यस रोगलाई एकचोटि मात्र उपचार गरेर पुग्दैन। एकचोटि मात्र उपचार गरिने भए त जहाँ पनि गइन्थ्यो होला। तर समय–समयमा स्वास्थ्य–परीक्षणका लागि विदेशमा धाइरहनुपर्छ। कतिचोटि जाने? भिसा चाहियो, डलर साट्नुपर्‍यो, परिवार र आफ्ना सबै उद्योग–व्यापारलाई छाडेर महिनौँँ–महिनासम्म बाहिर बस्नुपर्‍यो। स्वास्थ्य–उपचारका निमित्त विदेश जाँदा सम्पूर्ण परिवारका सदस्यको र आºनो पनि मन स्थिर हुँदैन। बिरामी शरीर बोकेर विदेश जाँदा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तनाव खप्नु सजिलो कुरो होइन। विदेशमा बसी उपचार गराउँदा बिरामीलाई घरको सम्झनाले सताउँछ र सम्पूर्ण परिवारलाई पनि विदेशमा बिरामीलाई के भइरहेछ भन्ने डर–त्रासले सताउँछ। त्यसैले मैले या त नेपालमा या भारतमा स्वास्थ्य–उपचार गर्ने निर्णय गरेँ। अन्तमा मैले दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा बायोप्सी गर्ने विचार गरेँ। कथम्कदाचित् क्यान्सर भएको थाहा पाइयो भने पनि त्यहीँ शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्ने मनसाय बनाएँ।
छोराको आँखाबाट झरेको आँसुको एउटा थोपोले मेरो मनमा ठूलो हलचल ल्यायो। एकैचोटि मेरो शून्य दिमागमा एउटा परिवर्तन आयो। मैले पितृत्वको भावनाको स्पन्दन र स्पर्श अनुभव गरेँ। क्षणभरमै मेरो मनलाई एउटा अत्यन्त मार्मिक चिन्तनले झक्झक्यायो र लाग्यो अब मैले मेरो परिवारका निमित्त बलियो हुनुपर्छ। त्यसपछि भगवान्प्रतिको रिस तुरुन्तै हरायो र मनभित्रको अन्तरकुन्तरमा रहेका डर–त्रासयुक्त विचारहरू पनि न्यून भएर गए। मैले आफ्नो सम्पूर्ण मनमस्तिष्क एउटै कुरामा केन्द्रित गरेँ। कसरी बलियो हुने? अब के हुन्छ होला? कति बाँच्ने हुँ? जस्ता कुनै पनि कुरामा ध्यान गएन र डर पटक्कै लागेन। बरू एउटै कुरा सोचेँ, ‘अब मैले कसरी आफूलाई सम्हाल्ने? कसरी आफूलाई बलियो पार्ने? ताकि मेरो परिवारले चिन्ता नलेओस्।’ सुनील अस्पतालको बाहिर कुनै कुनामा बसेर आँसु झारिरहेका थिए होलान् वा आफ्ना साथीहरू र डाक्टरहरूसित मेराबारे कुरा गरिरहेका थिए होलान्, तर मचाहिँ एक्लै खाटमा बसेर आफूले आफैँलाई सम्हाल्ने र आफूले आफैँलाई बलियो पार्ने तरिकाहरू खोज्न थालेँ।
जब आफ्नो मन बलियो भयो, मेरो मुहारबाट डर गायब भयो। म हाँस्न सकेँ, खुला दिलले कुरा गर्न सकेँ र आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई पनि
आफ्नो क्यान्सर रोगबारे मैले आफ्ना परिवार, इष्टमित्र र साथीभाइहरूलाई विनाहिच्किचाहट खुलेर भनिसकेको हुँदा मलाई अरूसित कुरा गर्दा त्यती अप्ठ्यारो परेन। रोगलाई लुकाएर या यसबारे बोल्न डराएर अरूलाई केही नभनेको भए मलाई हरदिन हरपल जीन्दगी बिताउन गाह्रो हुने थियो। जब म कसैसित कुरा गर्थे‘, एक न एक दिन त उसले अवश्य थाहा पाउने थियो मलाई क्यान्सर लागेको कुरा। अनि जब म ऊसित कुरा गरिरहेको हुने थिएँ, ऊ केही नबोलीकन आँखाबाट मलाई दया र मायाको भावनाले हेरिरहेको हुने थियो, जुन मलाई स≈य र सजिलो हुँदैनथ्यो। आफूलाई कसैले दयाको पात्र बनाउने कुरा सोच्नै सक्तिनँ। जब कसैलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ मलाई के भएको छ, अनि ऊसित कुरा गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। आज मलाई कसैसित कुरा गर्दा कुनै सङ्कोच र अप्ठ्यारो पर्दैन र यसले मेरो आत्मबल बलियो बनाउँछ।
मैले र सुशीलाले उनीहरूसित धेरै बेर कुरा गरिरहन सकेनौँ। मलाई डर पनि लाग्यो उनीहरूका बारेमा अरू थप जानकारी लिएँ भने म उनीहरूलाई सहयोग दिन सकौँला कि नसकौँला भनेर। खास गरी बिरामीको अवस्था निराशाजनक स्थितिमा पुग्यो भने कहिलेकाहीँ जतिसुकै सहयोग गर्न चाहेर पनि गर्न सकिँदैन, झन् म त आफैँ बिरामी। त्यसैले एकैछिन कुरा गरेर उनीहरूसित बिदावारी भई म र सुशीला अस्पतालको कोठामा फर्कियौँ।
मैले डा. रावलको सहयोगबाट अस्पतालका अध्यक्ष र केही सञ्चालकहरूसित कुरा गरेर बच्चा खेल्ने कोठामा रङ्गरोगन गरी अलि रमाइला तस्बिरहरू राखिदिन अनुरोध गरेँ। आफ्ना तर्फबाट पनि मैले त्यहाँ एउटा डीभीडी र थुप्रै कार्टुन–फिल्महरू किनेर बच्चाहरूलाई फिल्म देखाउने व्यवस्थाका लागि ट्रस्टसित अनुरोध गरेँ। दुई दिनमै व्यवस्थापन पक्ष्’ले मेरो अनुरोधलाई स्वीकार्‍यो र पछि त्यो कोठा बच्चालाई रमाइलो गर्ने ठाउँ भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो, किनभने त्यो ठाउँ बच्चाहरू मात्र होइन, अभिभावकहरू पनि जम्मा हुने ठाउँ भयो।
29 thoughts on “MySansar Exclusive: खोज (भाग २)”
Pingback: पुस्तक अंशः खोज (भाग ८) « Mysansar
सोच पढ्दा आसबादी र उत्साहित भएको थिए यो लेख पढेर अत्यन्तै भाबुक बन्न पुगेको छु तथापि कर्ण साक्य को आत्मबल लाइ सम्झेर खुसि लागेको छ …
यो लेख पढेर मेरो मन छोयो आफुलाई पिडा हुदाहुदै पनि आफु जस्तो अर्को रोगीलाई सहनाभूति दिन सक्ने उहाको खुबीलाई मानैपर्छ. जिन्दगिको यात्रा निकै छोटो हुदा हुदा पनि हरेक प्राणीलाई अझ धेरै बाच्ने चाहना हुन्छ , तर मानिसको बाच्ने समय माथिनै तोकेर आएको हुन्छा तेसैले कसैले चाहेर पनि समय भन्दा धेरै र थोरै बाच्ने उसको हातमा हुदैन .तर आफ्नो समयलाई भने खेर जान दिनु हुदैन ढिलो होस् या चाडो एकदिन त जाने पर्छ यी कुरामा रुमलिने हो भने मानिस कहिले पनि अगाडी बढन सक्दैन . त्यो कुरालाई लेखकले बुझाउन खोज्नु भएको भान हुन्छ ..
नेपाली समाजको लागि कर्ण शाक्यले दियको योगदान अविस्मरणीय रहेनछ. यसै गरि समाज लाई सचेत गराई जीवन जिउने आधार बताई दिनु हुनेछ . लेख को लागि लेखक र सालोक्य जी लाई धन्यवाद .
DB Yakkha says:
Im proudly excited from this article.And deeply respected to the auther Mr. Karna Shakya.
फेरी दोहोर्याउदै पढ्दै छु,
खुसि को सिमा नै छैन.
हार्दिक धन्यवाद मेरोसंसार अनि कर्ण दाइँलाई
Dirgha KC says:
अति शरल भाषामा मर्म इश्पर्शी लेख लेख्ने कर्ण शाक्य जी लाई मेरो सलाम. लाखौ लाखको आसिर्बाद ले तपाई १०० यौ वर्षा बच्नुहुनेछ.
Mohan Bhandari (Scotland) says:
मेरो आमा स्तन क्यान्सर बाट २ वर्ष पहिले बित्नु भयको हुदा क्यान्सर को बिरामी लाई देख्ने, सुन्ने र पदने बितिकै आफ्नो आमा लाई सम्झने गर्दछु र आखा रसायर आउछ. बिशेस गरि नेपाल मा स्तन क्यान्सर सम्बन्धि केहि गर्ने सोचाई बुन्दै छु. ब्कर्ण शाक्य ज्यु राम्रो मान्छे लाग्यो तर यत्रो समय सम्म उहा बारे अनभिज्ञ रहेछु. उहा प्रति मन मा यक प्रकारको सम्मान जागेर आयो र यो लेखमा बारम्बार प्रयोग भैरहेको सब्द “आङ्खना” बारे थाहा हुने सकेन.
आफ्नै, आफ्ना, आफ्नी हुनु पर्नेमा “आङ्खना” “आङ्खनी” भाको हो. टाईप मिस्टेक
अलि समिक्छात्मक बन्दा खेरि लेखको अघिल्लो भाग चाहिने भन्दा बढी तन्किए जस्तो लाग्यो. अमेरिका बैंकक र पैसाको कुराले धनाड्य बर्गको प्रतिनिधि भएको छनक दिन्छ. बिचको भाग खास गरि अस्पतालमा भेटेको नेपाली बुढा बुढीको बर्णन कारुणिक र मन छुने खालको छ. लेखमा उहाको जीवन भोगाईमा मानबिय सम्बेदना घोलिएको अनुभब प्रसस्त गर्न सकिन्छ र जानकारीमुलक पनि. मेरो बुझाई लेखेको हुँ. साथीहरुको फरक धारणा पनि हुन सक्छ है.
लेखक भनेका साहित्य फाटका कूक हुन् , पाठक बर्गलाई एक पटक चखाएर पल्के भने खोजी खोजी पढी दिन्छन पाठकले/ अब कर्ण शाक्य ज्यु ले मोज ,भोज , घोच ,कोच , खोच जे लेखे पनि चल्छ /कृष्ण धाराबासी ले पनि यस्तै यस्तै हुन् लेख्ने बढी भय जस्तो लाग्या छैन! शुभकामना छ होटलका तला थप्या जस्तै साहित्यलाइ पनि उचाल्नुस , गर्ने भनेको सक्नेले हो यो संसारमा…….
ति दिबंगत तपाइंको आफन्त प्रिय जनहरु असोभाबिक निधन प्रति गहिरो दुख ब्यक्त गर्दै उहाँहरुको को आत्मा को चिर सान्ति का लागि म इस्वोर संग प्रार्थना गर्दछु / तेस्तो दुखद घडी को बेला, म तपाईं र अरु बाकि परिवार को अवस्था कस्तो रह्यो होला भन्ने , म कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दिन र तपाइंले देखाउनु भएको सहस र धैरता को सधैं कदर गरिरहने छु / तेस्तो समय भोग्नु भएको व्यक्ति केहि अन्तरालमा तपाईं आफु पनि तेही रोग को अवस्था मा पर्न लेख्नु त झनै मन र चित्त थामी नसक्नु पिडा हो यो जो कोहीलाई, म तपाईंको साहास को सराहाना गर्दछु / तपाइंको स्वास्थ लाभ को कामना गर्दै दिर्घ जीवन प्राप्ति को लागि म सधैं इस्वोर संग प्रार्थना गरिरहने छु /
सत्यताको अनुभव र शिक्षा को लेख एकदम राम्रो लग्यो . यस्तो लेखले अरु लाइ पनि जिउने संजीवनी दिनु भयकोमा धेरै राम्रो कदम भएको जस्तो लाग्यो. दिर्घायुको कामना र भबिष्य पनि यस्तै यस्तै संजीवनी बाध्न सकुन .
सोच पढी सकेको थिय, खोज पढ्न पायको मा अति खुसि छु, कर्ण शाक्य जी तपाई हाम्रो लागि ११० बर्ष बाच्नु पर्छ /अरु के भनौ /खोज प्रकाशन गरेको मा माइसंसार अनि सालोक्य जी लगायत टिमलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ /
हृदयस्पर्शी सरल भाषामा लेखिएको लेख| पड्दै जादा धेरै पटक आखा रसाए|कर्ण शाक्यको यो कदमलाई सलाम! तपाई जस्ता सच्चा दिलवाला १०० वर्षा बाची रहनुस, मेरो शुभकामना!
while going through the book, rather than letting your tears flow why did you not make resolution to do something for the family and the society???
घरिघरि यो माई संसार जस्तो वेवसाइड मा जावो व्यक्तिको
मनगठन्ते कुरो राखेर सम्पादकजीले आफ्नो लोकप्रीयता किन घटाएको
होला ! लेखमा खासै केचाहि होलार, भनेर मन व्दुविदा बनाउदै पढियो
तर मैले सोचेको भन्दा ठिक उल्टोक र्हिदय स्पर्शी,शन्देस मूलककक
र चेतनामूलक हरेक नेपाली मनहरूले पढनै पर्ने यो पुस्तक । त्यसैले
कुशल लेखक श्रष्टाकर्ण शाक्य ज्यूलाई हार्दिक वधाई सहित
हवाँको सुस्वास्थ्य रदार्घायूको कामना गर्दछु ।
रिदयस्पर्सी कस्तो सलल बगेको लेख , कर्ण शाक्य सच्चा मानबिय दिल भएका मानिश rahechan . सलाम कर्ण शाक्य लै.
कर्ण शाक्य जी को लेखाई हृदयस्पर्शी छ/ उहाँको व्यक्तित्व र सोच अनुकरणीय छ/ यस्तै सय-पचास मान्छेहरु राजनीति लगायत सबै क्षेत्रको शिखरमा बसी हाम्रो समाजलाई हाँक्ने हो भने नेपाल कति सुन्दर हुन्थ्यो होला/
भगबानको आशिर्बाद र नेपालीहरुको सद्भावले उहाँको दिर्घायु होस्/
नविन बन्जाडे , बेलायत
कति मन छुने र आखा रसाउने सब्द हरु छन् , हजुर को सोच पढेको थीय सारै नै मन छोयको थीयो र मन मा नेपाल को डोल्पा र अरु धेरै ठाउँ घुम्ने ईच्छा जागेको छ यसको लागि धन्यबाद छ . केयान्सर को क्षेत्र मा हजुर को योगदान ले धेरै लाई राहत मिलेको देख्दा र तपाइको सोच ले धेरै मान्छेको सोच मा परिबर्तन लेआयको मा हदै सम्मको खुसि मिलेको छ .र झट्ट हेर्दा आफ्नो बारेमा धेरै छ तर हरेक कुरा सचेत मुलक र सचेत पुर्बक छन् ……साथी हरु यो पुस्तक कहाँ किन्न पाउछ जानकारी दिनु भयमा मा धन्यवाद दिरहने थीय [email protected]
सत्य लेख्न गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि अाफ्नै विषयमा । नेपाली भाषाका शालीन पाठकहरू प्रसस्त हुनुहुन्छ, यसले ती धेरै पाठकहरूलाइ लाभावान्भित गर्नेछ । कर्ण शाक्य जी ले गरेको यो प्रयास मलाइ शाहसिक लाग्यो ।
ललित कुमार तामांग says:
जति पढ्यो उती धेरै पढु पढु लाग्ने खालको कस्तो राम्रो सरल भाषामा लेख्नु भएको रहेछ् कर्ण शाक्य ज्यु ले । कति भावुक अनि हृदयनै छुने खालको किताब लेख्नु भएछ। तपाईं जस्तो ब्यक्ति हाम्रो लागि १०० बर्ष सम्म बाच्नुहोस् यहि छ हाम्रो शुभकामना। I wish I could buy your books but I am sure it’s not available in Middle East. Your books are so touchy and informative.
धेरै गहकीलो, पीडादयक, सच्चा अनुभव अनी राम्रो मन छुने लेख- सबैले पढ्नै पर्ने- तर अहिलेका नानी केटा केटीहरुलाई येस्तो लेखहरु पढ्ने टाइम छैन, फेसबुकमा कम्मेन्ट गर्न अनी लाइक गर्नमा बीजी-
लेख मा सरल भाषा को प्रयोगले लेख एकदम गहकिलो छ ,यहाँ क्यान्सर को बारेमा एकदम सरल शब्द मा बर्णन गर्नुबहेकोमा लेखकको पुस्तक ले पक्का पनि राम्रो isthaan पाउने कुरामा दुइ मत छैन/मेरो आमा पनि २ बर्ष पहिला गल ब्ल्लादर क्यान्सर बाट मृत्यु बहेको थियो,यो रोग भनेको यति महँगो उपचार बिदि छ कि यहाँ लेख्ने शब्द छैन
तपाइको लेख अति शिक्षामुलक छ| तपाई हाम्रो हृदयमा अनन्तसम्म बाँचीरहनु हुनेछ|
Thank you so much, sir, for sharing your valuable experience with us. Indeed, you have been an exemplary citizen but more soatrue human being in real sense.
कुनै अपार शक्ति कतै छ भने उनैले तपाईलाई सुस्वास्थ्य र लामो आयु दिऊन भन्ने प्रार्थना गर्दछु|
धेरै राम्रो लेख पीडादायक अनुभव अनि सिच्छामुलक लेख
सबै ले पद्नु पर्ने
बधाई छ लेखक अनि प्रकासक महोदय लाई
मलाइ नेपाली हुनुमा गर्व लाग्ने एउटा
कारण हो कर्ण शाक्य!
जसको सोचले बदल्दियो मेरो सोच,
जसको खोज ले पुर्याईदिन्छ गंत्यब,
जसको हिर्दयमा शिव बिराजमान छन
जो सधै अमर हुने छन हाम्रा अनि भावी
सन्ततिका मानस पटल मा !!